Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Xayiraadaha Socdaalka Cusub ee booqdayaasha Hawaii
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
John de Fries, Maamulaha Maamulka Dalxiiska Hawaii
Isbitaalada Hawaii ayaa ku dhow inay buuxaan, sariirta ICU si dhib yar looma heli karo, laakiin in ka badan 20,000 oo booqdeyaal ah ayaa wali soo gala Aloha Sheeg maalin kasta.
Sannad aamusnaan ah ka dib, Maamulaha Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii ayaa hadda hadlaya isagoo ku boorinaya booqdayaasha iyo dadka deggan inay guryahooda joogaan oo aysan safrin.
Sidaas waxaa maanta ka dhawaajiyay Guddoomiyaha Hawaii Ige.
Guddoomiyaha Hawaii. David Ige wuxuu maanta ugu yeeray dadka deggan Hawaii iyo booqdayaasha inay dib u dhigaan dhammaan safarada aan muhiimka ahayn illaa dhammaadka Oktoobar 2021 sababtuna tahay dhawaanahan, dardar-gelinta kiisaska COVID-19 oo hadda culeys ku haya xarumaha daryeelka caafimaadka iyo kheyraadka gobolka.
Guddoomiye Cige ayaa ku dhawaaqay Jimcihii mar uu la hadlayey warbaahinta, isagoo xusay, “Isbitaalladeenu waxay gaarayaan awood iyo ICU -dayada ayaa buuxsamaya. Hadda ma aha wakhti ku habboon in loo safro Hawaii. ”
Guddoomiye Ige wuxuu raaciyay, “Waxay qaadan doontaa lix illaa toddoba toddobaad si loo arko isbeddel weyn oo ku yimaada tirada kiisaska COVID. Waa wakhti halis ah in la safro hadda. Qof walba, dadka deggan iyo booqdayaashaba, waa inay yareeyaan safarka ay ku tagayaan hawlaha ganacsi ee muhiimka ah oo keliya. ”
Hawaii weli waxaa ka buuxa dad soo booqda. Suuqyada wax laga iibsado sida Ala Shoana Shopping Center, Waikiki, iyo hoteellada badankoodu waa buuxaan. Duulimaadyada waa la iibiyaa, laakiin tani waxay noqon kartaa mid aad u dhakhso badan.
Dalxiisku waa warshadaha ugu weyn ganacsiga Aloha Gobolka. Xayiraadaha cusub ee soo gala dalxiiska ayaa curyaamin kara warshadan iyo dhaqaalaha gebi ahaan Gobolka Hawaii.
Iyada oo ilaa 1000 xaaladood oo cusub oo ah COVID-19 ah, isbitaallo ay buuxaan, dalxiisku hadda ma sii jiri karo xilligan Aloha Gobolka. Mas'uuliyiinta Hawaii iyo inta kale ee Mareykanka ayaa dhaqaalaha ka hormariyay caafimaadka, khaladkan ayaana hadda muujinaya - waana cabsi. Hawaii oo ah jasiirad ahaan waxay leedahay xitaa caqabado waaweyn.
John De Fries, madaxweynaha, iyo agaasimaha guud Maamulka Dalxiiska ee Hawaii waxay xustay in kasta oo soo -booqdaha guud ahaan durbaba bilaabeen inay hoos u dhacaan, sida taariikh ahaan dhacda xilliga dayrta, booqdayaashu waa inay tixgeliyaan dib u dhigista safarradooda Hawaii.
"Bulshadeena, deggeneyaasha, iyo warshadaha soo -booqdayaasha ayaa mas'uul ka ah wada shaqeynta wax ka qabashada dhibaatadan," ayuu yiri De Fries. "Sidaas oo kale, waxaan si xoog leh kula talinaynaa booqdayaasha in hadda aysan ahayn waqtigii ku habboonaa ee la safri lahaa, waana inay dib u dhigaan safaradooda illaa dhammaadka Oktoobar."
Dr. Elizabeth Char, oo ah agaasimaha Waaxda Caafimaadka, ayaa ku nuuxnuuxsatay deg -degga xaaladda hadda jirta. “Kordhinta kiisaska COVID waxaa inta badan sabab u ah faafitaanka bulshada, oo ay raacaan dadka deggan oo u duulaya aagagga hotspot ee dibedda ah oo COVID ku soo celiya qoysaskooda iyo bulshada,” ayuu yiri Char. "Haddii arrimuhu is -beddeli waayaan, nidaamyadeenna daryeelka caafimaadku way naafoobi doonaan oo kuwa u baahan daryeel caafimaad dhammaan noocyada cudurrada, dhaawacyada, iyo xaaladaha, oo ay ku jiraan booqdayaasheenna, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay helaan daaweynta ay u baahan yihiin isla markiiba."
Xarunta Hawaii Shabakada Dalxiiska Adduunka ayaa ku boorriyay Maamulka Dalxiiska ee Hawaii iyo Guddoomiyaha Gobolka Hawaii Ige inay wax ka qabtaan. Codsigan waa la iska indho tiray waxaana laga jawaabay iyadoo laga mamnuucay daabacaadan inay su'aalo weydiiso munaasabadaha saxaafadda.
eTurboNews saadaaliyay xannibaadyo badan ayaa soo socda, tanina waa talaabada koowaad ee maanta.
Waqtigaan, waxaa jira xannibaadyo socdaal oo saameyn ku leh dhammaan Jasiiradaha waaweyn ee Hawaii, oo ay ku jiraan jasiiradaha Oahu, Kauai, Maui, Hawaii (Jasiiradda Weyn), Molokai, iyo Lanai.
Tan waxaa ka mid ah xannibaadaha safarka trans-Pacific ee looga baahan yahay dhammaan socotada aan hadda ku tallaalin gudaha Mareykanka.
Waqtigan, sababtuna tahay kororka kiisaska maxalliga ah ee uu sababay kala duwanaanshaha Delta, waxaa la saadaalin karaa in xannibaadaha safarka dib loo soo celin karo, oo ay ku jiraan baaritaannada PCR ee qof kasta oo yimaada Aloha Sheeg si aad uga fogaato karantiilnimada 10-ka maalmood ah ee weli khasabka ah.
Imtixaanka ayaa hadda khasab ku ah socotada aan la tallaalin oo keliya.
10 -kii Ogosto xayiraadaha cusub ee soo socda ee Gobolka dhexdiisa waxaa amray Guddoomiye Cige.
Kulammada bulsheed waxay ku koobnaan doonaan in aan ka badnayn 10 qof oo gudaha ah iyo in ka badan 25 bannaanka.
Macaamiisha baararka makhaayadaha iyo goobaha bulsheed waa inay la fadhiistaan ​​dhinacyada ilaalinaya ugu yaraan 6 ft fogeynta u dhexeeya kooxaha (oo leh tirada ugu badan ee 10 gudaha iyo 25 bannaanka); ma jiri doonto isku -dhafnaan, waji -xidhna waa in la xidhaa mar walba marka laga reebo marka si firfircoon wax loo cuno ama la cabbo.
Degmooyinku waxay dib u eegi doonaan soo jeedinta dhammaan munaasabadaha si xirfadaysan loo soo agaasimay oo loogu talagalay in ka badan 50 qof, si loo hubiyo in dhaqannada ku habboon ee nabdoon la hirgelin doono. Qabanqaabiyayaasha dhacdooyinkan xirfadeed waa inay ogeysiiyaan oo la tashadaan wakaaladaha degmada ee soo socda ka hor dhacdada. Oggolaanshaha degmada ayaa looga baahan yahay dhacdooyinka xirfadeed in ka badan 50 qof.
Juergen Steinmetz, gudoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka yiri isagoo ka jawaabaya ogeysiiskan: Waan ku faraxsanahay inaan arko HTA oo ugu dambayn hadlaysa. Sida iska cad, kani sidoo kale waa gurigeena, waxa halkan ka dhacaana wuxuu ka dhigayaa mid shaqsiyeed. Waxaan mar kale siinnaa Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii taageeradooda si aan ula shaqayno shabakadeena caalamiga ah iyo khubarada iyo hoggaamiyeyaasha 128 dal si ay isugu dubariddo oo u maareyso dhibaatadan halista ah.
Jane Clausing wuxuu leeyahay,
Ogosto 28, 2021 markay tahay 13:57
Waxaan ahay dalxiise lagu waday inuu Maui ku sugnaado toddobaadka dambe. Waxaan baajinaynaa sababta oo ah guddoomiyaha iyo codsiyada duqa magaalada. Tirtiriddu way adkayd maxaa yeelay waxay ahayd sannad -guuradii 50 -aad, laakiin waxaan isku daynaa inaan si sax ah u sameyno. Bixiyahayaga guriyeynta ayaa diidaya inuu nala shaqeeyo si kasta (waxaan lumineynaa $ 7500 si aan u sameyno waxa saxda ah). Dhammaan shirkadaha kale ee wershedaha la xiriira socdaalka ayaa ku guda jira baajinta boos celinta oo leh lacag celin buuxda oo ay ku jirto duulimaadka. Waxaan dareemeynaa in la isticmaalo!
Kurt wuxuu leeyahay,
Ogosto 28, 2021 markay tahay 06:49
Gebi ahaanba waan kugu raacsanahay Sharon! Munaafaqnimada joogtada ah ee bidixda!
Sharon wuxuu leeyahay,
Ogosto 26, 2021 markay tahay 16:56
Dhanka kale, Joe Biden wuxuu sii wadaa inuu albaabka xadkayaga si ballaadhan ugu furo Sharci -yaqaannada Wanaagsan ee Covid, ka dibna wuxuu ka cawdaa Delta Variant. Waa Munaafaqnimo. Haddii uu runtii dan ka lahaa faafitaanka Covid, wuxuu xiri lahaa xadkayaga Mexico.
Giblet wuxuu leeyahay,
Ogosto 24, 2021 markay tahay 01:53
VT wuxuu xirey gobolkiisii ​​dadka aan daganeyn, maxaa u diidi waayey HI?